dress – OOTDMYANMAR
5 GIRLY WAYS TO WEAR A DRESS, ACCORDING TO ART BY LANN
No Comments on5GIRLY WAYS TO WEAR A DRESS, ACCORDING TO ART BY LANN
Art by Lann လို ဂါဝန်လှလှလေးကို မိန်းကလေးဆန်ဆန်ဝတ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၅ သွယ်
Htoo Htoo Htet Aungabeauty blogger and definitelyafashionista always captivates us with her girly looks. Her makeup looks are always on point like her style. This beauty b/vlogger always style her OOTDs with fun, feminine touch, andamagical way of fusing these ‘styles’ together. So, we’ve rounded up five girly MDS Myanmar dress outfits from Lann you should definitely get inspiration from.
Beauty blogger တဖြစ်လည်း ဖက်ရှင်စတား ထူးထူးထက်အောင် က သူမရဲ့မိန်းကလေးဆန်တဲ့ fashion look တွေနဲ့အမြဲဆွဲဆောင်နိုင်တာကိုတွေ့ရမှာပါ။ Lann ရဲ့ မိပ်ကပ်အပြင်အဆင်တွေကလည်း သူမရဲ့စတိုင်တွေလိုပဲ အမြဲတမ်းထူးခြားနေပါတယ်။ Beauty blogger Lann က သူမရဲ့ OOTD တွေကို ပေါ့ပါးပြီး မိန်းကလေးဆန်တဲ့အပြင်အဆင်နဲ့ စတိုင်မျိုးစုံကို မှော်ဆန်ဆန် ပေါင်းစပ်ပြီး ဝတ်ဆင်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Lann ရဲ့ OOTD တွေထဲက MDS Myanmar ရဲ့ မိန်းကလေးဆန်တဲ့ ဝတ်စုံလှလှလေးငါးစုံကို အချစ်တို့အတွက် ရွေးထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
#1 Red Floral Dress withared lips and heels (ပန်းပွင့်အဆင်၊ အနီရောင်နှုတ်ခမ်းနီ နဲ့ _ဒေါက်ဖိနပ်)
Photo credits to @artby_lann Outfit from @mdsmyanmar
#2 Polka LBD with ballet flats and dangling earrings (Polka LBD ၊ ဘဲလေးဖိနပ်အပါး နဲ့ နားဆွဲ )
#3 Nude lips and nude ruffled dress withaleather bag (အသားရောင်နှုတ်ခမ်းနီ နဲ့ ဂါဝန် ၊ သားရည်အိတ်)
#4 Justapretty pink dress (ပန်းရောင်ဂါဝန်)
#5 Navy blue dress withaleather bag and shoes (အပြာရင့်ရောင်ဂါဝန် ၊ သားရည်အိတ် နဲ့ ရှူးဖိနပ်)
Make sure to check out MDS Myanmar’s special sale:
Also they are open now. (ဆိုင်တွေလည်း ပြန်ဖွင့်နေပါပြီ။ )
Tags dress, mdsmyanmar, ootdmyanmar
Join 112,102 other followers